Ọ dị mkpa iji VPN? Uru na ọghọm | Akụkọ akụrụngwa
Ọ dị mkpa iji VPN?
Ihe ojoo ohuru ndi metutara nzuzo nke Facebook, yana nke Google n’agbanyeghi n’obere oke, gosiputara anyi ozo nzuzo kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa maka ndị ọrụ niile iji gbochie nnukwu ụlọ ọrụ ịzụ ahịa data anyị dị ka a ga-asị na ha nọ na ụlọ ahịa ọdịnala.
Oge ọ bụla anyị nụrụ banyere mkparị nzuzo ọhụrụ, ụlọ ọrụ emetụtara na-achọta ụzọ ndị ọzọ iji nwee ike gaa n'ihu inweta data onye ọrụ, ruo mgbe a ga-achọpụta ya ọzọ wee gaa usoro ọzọ. Bestzọ kachasị mma na naanị iji chebe data anyị n'aka ndị ọzọ bụ site na iji VPN.
Mgbe m kwuru na ọ bụ naanị ụzọ iji chebe onwe anyị, ọ bụ na nwute, ọ dị otu a. Ọ bụ ezie na anyị enweghị akaụntụ Facebook, oge ọ bụla anyị gara na ibe nke netwọkụ mmekọrịta a, na ngwa anyị arụnyere trackers bụ ndị na-ahụ maka ịdekọ ọrụ anyị niile nke ihe nchọgharị anyị na-eji.
Mgbe ị na-eji nyocha ọchụchọ, ihe ngwọta kachasị eji eme ihe bụ nke Google nyere, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike iji ihe nchọgharị Microsoft a na-akpọ Bing. Ha abụọ ha na-edekọ ọrụ anyị na ịntanetị, iji nakọta data anyị ma si otú a nwee ike iduzi ọrụ mgbasa ozi ha na-enye.
2 Kedu otu VPN si arụ ọrụ?
3 Kedu ihe VPN maka?
3.1 Jikọọ na sava nke ụlọ ọrụ anyị n'enweghị nsogbu
3.2 Mafere oke ala
4 Ihe na-adịghị mma nke VPNs
4.1 Mbelata ọsọ ọsọ
5 Kedu ihe anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ego VPN?
5.1 Ngwaọrụ dakọtara
5.2 Ndepụta ọcha
5.3 Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ
Acronym VPN, sitere na Bekee Virtual Private Network, nke atụgharịrị n'asụsụ Spanish bụ Virtual Private Network, netwọkụ guzobere na ntanetị (yabụ mebere) iji jikọọ na ihe nkesa ma ọ bụ sava. Njikọ ahụ dị nchebe kpamkpam ọ dịghị onye ọzọ nwere ike ịnweta nkwukọrịta, ebe ọ bụ na ezoro ezo site na mmalite ruo na njedebe.
Ọrụ njedebe a na-echebe nkwukọrịta, ọ bụghị naanị maka ngwaọrụ desktọọpụ. Anyị nwekwara ọrụ VPN anyị nwere maka ngwaọrụ mkpanaka dịka gam akporo na iOS, ngwaọrụ mkpanaka ndị aghọwo ngwa ọrụ eji eme ihe ebe ọ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ site na ebe ọ bụla. Have nwere ozi ndị ọzọ gbasara otu esi eji ya na ngwaọrụ ndị a ebe a.
Kedu otu VPN si arụ ọrụ?
Ma ugbu a anyị matara ihe VPN bụ, ka anyị nwaa ịkọwa otu o si arụ ọrụ. Iji nweta ozi ọ bụla site na ịntanetị, ngwaọrụ anyị jikọtara ya na ndị na-eweta ịntanetị anyị, ma ọ bụ nke anyị nyere ya n'ụlọ n'ụlọ ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ ekwentị. Onye na-eweta njikọ anyị na-enye anyị ọdịnaya anyị rịọrọ na echekwa ndekọ kwekọrọ.
Ọ bụrụ na anyị ejiri VPN, mgbe anyị na-achọ ịntanetị, arịrịọ niile anyị na-arịọ zigara ozugbo na VPN na anyị nwere nkwekọrịta na-enweghị ịgabiga onye na-eweta ịntanetị anyị n'oge ọ bụla, n'ụzọ dị otu a, anyị na-ezere ịhapụ ụdị ọrụ ịntanetị anyị.
Anyị na-ezere ịhapụ obere ọrụ anyị na ịntanetị, n'ihi na ọrụ VPN edebela ihe ndekọ ọ bụla nke ọrụ ịntanetị anyị, ọ bụrụhaala na a na-akwụ ha ụgwọ ọrụ. Ihe VPN n'efu na-enye anyị ụfọdụ amaghị aha anyị nwere ike ịchọ, mana na-efu ọtụtụ àjà dị ka ọsọ njikọ yana na data anyị na-eme nchọgharị mechara ree ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Kedu ihe VPN maka?
Na mgbakwunye ikwe ka anyị na-agagharị na nzuzo, VPNs nwere ọrụ ndị ọzọ na-eme ha nke ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu jiri maka ihe dị iche:
Jikọọ na sava nke ụlọ ọrụ anyị n'enweghị nsogbu
Ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ ndị na-eji sava ha ebe ha na-echekwa ozi njikwa ụlọ ọrụ niile. Agaghị ekpughe ozi ahụ nke onye ọrụ ọ bụla nwere ihe ọmụma zuru ezu nwere ike ịnweta ha ma zuo ohi ha ka ere ha n'ahịa ojii (ebe ọtụtụ data ezuru n'aka nnukwu ụlọ ọrụ na-ejedebe).
Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị a nwere ohere ịrụ ọrụ site n'ụlọ, a manyere ha iji VPNs, ịmepụta njikọ dị nchebe n'etiti onye ahịa (onye ọrụ) na sava (ụlọ ọrụ). Njikọ a bụ ihe ezoro ezo ruo na njedebe ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume (ekwula mgbe ọ bụla) ịhapụ ya iji nweta okporo ụzọ na-asọ ma ụzọ abụọ.
Mafere oke ala
Na mpụga ebe azụmahịa dị, a na-ejikarị VPN iji agafe ókèala ala. Otu ihe eji eme ya bụ ike nweta ọdịnaya dị na mba ndị ọzọ nke ọrụ vidiyo dị iche iche gụgharia nke anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, ọrụ ndị nwere katalọgụ dị iche maka mba ọ bụla.
Ọ bụkwa naanị nhọrọ iji nweta ibe weebụ ndị a na-egbochi Na mba ụfọdụ, ibe weebụ enwere ike ịnweta site na IP edenyere na mba ọzọ, ebe ọ bụ naanị nhọrọ iji nwee ike ịgabiga oke nke gọọmentị ụfọdụ guzobere, mba dịka China na Russia amachibidoro iji ụdị ngwa a. .
Uru ọzọ nke VPNs na-enye anyị bụ ohere nke ịgafe mgbochi nke onye na-eweta anyị ma a bịa na ya budata ọdịnaya site na ịntanetị, na-eji usoro P2P eme ihe. Countriesfọdụ mba na-ewepụta oke mmachi dị mkpa mgbe ha na-anwa izere izu ohi site na ịntanetị, na-egbochi iji ụdị usoro a.
Ihe na-adịghị mma nke VPNs
O doro anya, ọ bụghị ihe niile nwere ike ịma mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri VPN. Ndị a na-metụtara a usoro nke ndọghachi azụ na anyị zuru ezu n'okpuru:
Mbelata ọsọ ọsọ
Nanị ihe ndọghachi azụ anyị na-ahụ mgbe ị na-eji ọrụ VPN bụ ha anaghị arụ otu ụdị ọsọ ahụ karịa onye na-ahụ maka ịntanetị anyị, yabụ dabere na ọrụ anyị na-eji, nchọgharị nwere ike ọ ga - adị nwayọ nwayọ ma ọ bụ obere. Ihe a, yana n'efu ma ọ bụ nke ọrụ ahụ, bụ otu n'ime ihe ndị anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-akwụ VPN ọrụ.
Kedu ihe anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ego VPN?
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ichedo njikọ internetntanetị anyị n'oge niile, ma site n'ụlọ anyị ma ọ bụ site na ama anyị, anyị ga-eburu n'uche na ọrụ ahụ dakọtara na ngwaọrụ mkpanaka na kọmputa kọmputa (Windows, macOS na Linux) na ndị ọzọ n'ji video gụgharia ngwaọrụ (Apple TV, Chromecast, Fire TV ...).
Applicationsfọdụ ngwa na weebụsaịtị nke ụlọ akụ, adịghị akwado ọrụ VPNYa mere, ọrụ anyị na-enye nkwekọrịta ga-ekwe ka mgbakwunye nke ndị ọzọ, ndị ọzọ na-enye anyị ohere itinye ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị ndị na-agaghị eji VPN na-enweghị mmanye ka ha kwụsị ọrụ ahụ nwa oge, yana ihe egwu na anyị ga-echefu ịlaghachi iji rụọ ọrụ ya.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ
N'ụlọ ọ bụla, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ, ma ọ bụrụ na ha bụ smartphones, mbadamba, kọmputa, igbe edozi ... ngwaọrụ ndị dabere na njedebe ọrụ ahụ guzobere, nwere ike ibu nsogbu ma ghara inye nchebe nke anyị nwere ike ịchọ ezinụlọ anyị dum.
Site Actualidad Ngwa anyị nwere ike ikwu na ị na-agụ ndị a ProtonVPN echiche, otu n'ime ihe kachasị mma maka nchekwa ya na uru maka ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Ọ dị mkpa iji VPN?
Ngwa kachasị mma maka oku vidiyo otu
iPad (2019): dị ọnụ ala ugbu a ibu [Nyocha]